नाटक 'अर्को अर्थ नलागेमा' हेर्न दर्शकको भिड, टिकट नपाएर घर फर्किन बाध्य भए - Reel Mandu
नाटक ‘अर्को अर्थ नलागेमा’ हेर्न दर्शकको भिड, टिकट नपाएर घर फर्किन बाध्य भए
फागुन १८ गते देखि सुनील पोखरेलको परिकल्पना तथा संयोजनमा नाटक ‘अर्को अर्थ नलागेमा’ मण्डला नाटक घरमा मञ्चन भैरहेको छ। पहिलो शो बिशेष व्यक्तिहरुलाई देखाइएको थियो भने नाटक हेरिसकेपछि उपस्थित व्यक्तिहरुले करिब एक बर्षपछि एउटा राम्रो नाटक हेर्न पाएको र नाटक एकदम राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो।
नाट्यप्रेमी दर्शकका लागी भने दोश्रो शो देखि मात्र टिकट बुकिङ्ग खुल्ला गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण दर्शकहरु नाटक हेर्न आउछन कि आउदैनन भन्ने एक प्रकारको डर भएता पनि दर्शकहरुको उपस्थिति अनपेक्षित रुपमा निकै बाक्लो थियो। सोचे भन्दा तिब्र गतिमा टिकट बुकिङ्ग भएपछी धेरै दर्शकहरु टिकट नपाएर निरास हुदै घर फर्किन बाध्य भए।
नाटक ‘अर्को अर्थ नलागेमा’ को दोश्रो शो हेर्न आएका दर्शकहरुले नाटक हेरिसकेपछि नाटक निकै उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नाटक हेर्न आएका दर्शक मध्ये एकले रिल माण्डु संगको कुराकानीमा ‘नाटकमा ‘क’ ख’ ग’ घ’ देशको कथा भनिएता पनि हाम्रो देशको अहिलेको बर्तमान राजनीति परिवेशलाई निकै अर्थपूर्ण ढंगले चित्रण गरिएको जसले आम मानिसमा चेतना जगाउने बताए।
देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार र अस्थिरतालाई निकै चोटिलो र रमाइलो तरिकाले व्यंग गरिएको नाटक ‘अर्को अर्थ नलागेमा’ हरेको व्यक्तिले एक पटक अवस्य हेर्नुपर्ने नाटक हेर्न आएका दर्शकले बताए।
‘यत्रो प्रयास गर्दा गर्दै पनि एउटा न एउटा इमानदार मान्छे फुत्त देखापर्छ चाहिँ कसरी? कतै व्यवस्था नै उल्टाउन खोज्ने प्रतिगामीहरूको हात त छैन? विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र पनि त हुन सक्छ साथीहरू !’ नाटकमा भएको एउटा संवाद हो यो। यस्ता संवादहरुले दर्शकको मन छुन्छ।
लकडाउन पछि मञ्चन भएको यो पहिलो नाटक हो। फिल्म हलहरु खुले पनि दर्शकहरु फिल्म हेर्न हल नगएको अवस्थामा, नाटक हेर्न दर्शकहरु उत्साहित हुदै आएका छन्।
नाटक चैत ७ गतेसम्म मण्डला थिएटरमा हरेक दिन साँझ ५ः३० बजे मञ्चन हुनेछ भने शनिवारको दिन थप प्रदर्शन दिउसो १ बजे पनि हुनेछ। नाटकको टिकट बुकिङ्ग पनि खुल्ला गरिएको छ।
‘ज्ञ’ थिएटरका विद्यार्थीहरुको अभिनय रहेको यस नाटकलाई ‘ज्ञ’ कै १० जना विद्यार्थीहरुले निर्देशन गरेका हुन्। हरेक शनिबार कान्तिपुर पत्रिकामा छापिदै आएका लेखक तथा भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्तीको स्तम्भका लेखहरु ‘अर्को अर्थ नलागेमा’का स्तम्भमध्ये ११ वटा स्तम्भहरुलाई जोडेर नाटकमा रुपान्तरण गरिएको हो।